Xenial Xerus oo ku dhow geeska | Laga soo bilaabo Linux
Gerak | | GNU / Linux, Noticias
Waxaa loo sameeyay in la sugo, laakiin wax yar ayaa haray. Wax badan ayaa laga sheegay waxa uu Ubuntu LTS cusub soo kordhin doono, laakiin runtu waxay tahay tan tan Abriil 21 waa la sii dayn doonaa Xenial Xerus, noocii ugu dambeeyay ee Ubuntu 16.04.
Waxay noqon doontaa daah fur leh taageero waqti dheer ah, waxaana la filayaa inay si joogto ah u hesho ugu yaraan 5 sano. Waxay noqon doontaa nidaam aasaasi u ah horumarinta iyo hirgelinta shaqooyinka iyo astaamaha cusub, oo lagu dari doono waqti ka dib.
Xenial Xerus, Magac u gaar ah oo loo dhigay Canonical qaabkan cusub, wuxuu ka yimid Xenial, oo macnaheedu yahay "saaxiibtinimo"Halka Xerus loola jeedo nooc ka mid ah dabagalka, oo loo yaqaanno«xawaare iyo saaxiibtinimo«. Maxaa Ubuntu 16.04 siinaya sawir ah nidaamka dareeraha iyo saaxiibtinimada.
Wax ka yar laba toddobaad, wax badan ayaa horay loo ogaa waxa ay xirmadan LTS keeni doonto, waxaana hubaal ah inay jiri doonaan macluumaad badan oo badan oo aynaan weli garanaynin, si kastaba ha noqotee, wixii aan horay u ogaanay, waxaan haysannaa ku filan inaan ku faraxno arrintan. nooc cusub.
1 Kernel 4.4 iyo Midnimada 7 iyo 8
2 Xirmooyinka Snappy iyo dhammaadka Xarunta Ubuntu Software
Kernel 4.4 iyo Midnimada 7 iyo 8
Waxyaabaha ugu xiisaha badan ee ku saabsan xirmada 16.04, waa inay leedahay wax weyn xudunta 4.4, taas oo markii hore loo maleynayay inaysan sidaas sameyn doonin, sababtoo ah soo bandhigeedii ugu dambeeyay. Si kastaba ha noqotee, Canonical wuxuu ku guuleystey inuu dhexgalo Kernel 4.4, taas oo ah mid qumman, maxaa yeelay Ubuntu iyo Kernel labadaba waxaa loo sii daayay LTS, sidaa darteed dadka isticmaala waxay ku kalsoonaan karaan taageerada muddada-dheer ee labadaba nidaamkooda hawlgalka iyo Kernel-ka.
Dhinaca kale, waxaa jiray dood badan oo ku saabsan midnimada noocyadan cusub ay la shaqeyn doonaan. Dhamaadka, Desktop Ubuntu 16.04 waxaa maamuli doona Unity 7, laakiin Unity 8 waa ikhtiyaari. Mid ka mid ah isbeddelada muuqaalka weyn ee muuqaalkan, iyo ka jawaab celinta codsiga adeegsadayaashiisa muddo dheer, ayaa ah awoodda looga guuro Midnimada Launcher booska, isagoo ka sii daayay xabsi ku yaal dhinaca bidix ee miiska.
Xirmooyinka Snappy iyo dhammaadka Xarunta Ubuntu Software
Sii deynta ka dib, horumariyeyaasha Canonical waxay ku sharxayaan GNOME, sidaas Xarunta softiweerka Ubuntu waa la waayey, si loogu banneeyo kan beddelkiisa noqon doona: Xarunta softiweerka ee GNOME. Barnaamijyada horey loogu rakibay asal ahaan sida Empathy iyo Brasero ma sii ahaan doonaan, halka Gnome Kalandarka iyo xirmada 'LibreOffice' waxaa lagu rakibay si caadi ah.
Ubuntu 16.04 waxay taageeri doontaa xirmooyinka Snappy, iyada oo fikradda loo diyaarinayo nidaamka qalliinka ee loo yaqaan 'Unity 8' iyo is-dhexgalka suurtagalka ah ee barnaamijyada aaladaha moobaylka ee hoos yimaada Ubuntu, ujeeddadeeduna tahay isku xirnaanta nidaamyada.
Hada Canonical wuxuu sii daayay noocyada tijaabada maalinlaha ah ee Ubuntu 16.04 ilaa si rasmi ah loo sii daayo Abriil 21st. Betas-ka ugu dambeeya ee "dhadhanka" kala duwan ee nidaamkan hawlgalka ayaa sidoo kale la daabacay, oo ka mid ah bilowga LTS-ga: Ubuntu MATE, Ubuntu GNOME, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin, Mythbuntu, Xubuntu, Lubuntu, iyo Kubuntu, oo lagu soo daray nuqulkan ugu dambeeyay, oo tirtiraya dhammaan mala-awaalka la la'yahay.
Haddii aadan sugi karin sii deynta rasmiga ah ee Ubuntu 16.04, waxaad ku bilaabi kartaa adigoo tijaabinaya betas kasta oo distro ah, oo laga heli karo bogga Ubuntu.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Xenial Xerus oo u dhow geeska
Weydiin. Waxaan horeyba u isticmaali jiray Ubuntu 16.04 beta 64bit muddo laba toddobaad ah. Marka rasmiga ah ee Ubuntu 16.04 LTS taariikhda la sii deynayo yimaado, Abriil 21, ma inaan qaabeeyaa oo dib u cusbooneysiiyaa rakibidda Ubuntu? Ama, cusbooneysiinta aan maalin walba ka sameeyo nidaamka qalliinka, waxay si otomaatig ah u noqon doontaa LTS., Taasi waa, waxay joojin doontaa inay noqoto Ubuntu 16.04 Beta waxayna si otomaatig ah u noqon doontaa Ubuntu 16.04 LTS final. Salaan.
Weli waan la socdaa Ubuntu Mate 16.04 Beta, in kastoo aanan baarin, waxay ila muuqataa aniga oo cusbooneysiinta iyo kor u qaadista ku habboon aan ku jiri doonno nooca xasilloon marka la heli karo.
Ku jawaab Keiller
Iyada oo cusbooneysiinta adag ee ku filan. Kaliya waxay ka socotaa beta ilaa xasilloon. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad eegtaa "Asalka softiweerka" haddii aadan haysan ikhtiyaarka xirmooyinka la soo jeediyay ee la hubiyey iyo in aan la hubin.
Ku soo jawaab Sayo
Waxaan ku dari lahaa inay ka mid tahay server-ka Xorg qaybtiisa 1.18, jadwalka 11.2, iyo sidoo kale cusbooneysiin waaweyn oo ku saabsan darawalada fiidiyaha bilaashka ah (radeon iyo Nouveau)
Hagaag, haddii Debian uu horay u sii wato war kale marka laga reebo Ubuntu, waxay noqon laheyd mid cajiib ah.
Waxaan sidoo kale u arkaa ka mid noqoshada nidaamka faylka zfs mid cajiib ah
Sawirka labaad kumbuyuutarkee ah? Mawduuc noocee ah ayuu yahay, sideen ku helaa?
Ka ogow IP-gaaga dadweynaha boosteejada